Home /Blog/Shirka Golaha Wasiirada oo looga hadlay arrimaha amniga, dardargelinta fulinta qorshaha 90ka maalmood, Imtixaanada Dugsiyada sare, Shirkii London, bilicda caasimada iyo arrimo kale.
Muqdisho, 18 May 2017 – Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir-guddoominayay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Mudane Xasan Cali Kheyre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Amniga, dardargelinta Qorshaha 90ka maalmood, Imtixaanada Dugisyada Sare, Shirka London, bilicda caasimada iyo arrimo kale.
Wasiirka Dhalinyarada ayaa laga dhageystay warbixin ku aadan xuskii maalinta dhalinyarada iyo aasaaska SYL ee 15ka May, waxeyna sheegtay in xafladu si heer sare ah u dhacday, tanoo dhiirigelin weyn u noqotay dhalinyarada Soomaaliyeed. Wasiirada ayaa u mahadcelisey dhammaan intii suurtogelisay in xafladu u dhacdo sidii loogu talogalay.
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Si Balaadhan Loogu Soo Dhaweeyey Magaalada Guthenburg Ee Dalkaasi Sweden